Unoziva here kuti gomarara rave rechipiri rinotungamira kurufu munyika. Uye huwandu hwezviitiko zvitsva zvekenza zvinotarisirwa kuwedzera zvakanyanya mumakumi emakore ari kuuya. Mutsa tarisa nhau dzaCFM nhasi. | Jesson
Unoziva here kuti gomarara rave rechipiri rinotungamira kurufu munyika. Uye huwandu hwezviitiko zvitsva zvekenza zvinotarisirwa kuwedzera zvakanyanya mumakumi emakore ari kuuya. Mutsa tarisa nhau dzaCFM nhasi.
1. Russia Nhasi (RT) inoshuma kuti Chibvumirano cheNew Strategic Arms chekudzora pakati peRussia neUnited States chakawedzerwa zviri pamutemo kusvika Kukadzi 2026.
2.US: munaNdira, ADP basa rakawedzera ne174000 uye rinotarisirwa kuwedzera ne50, 000, zvichienzaniswa nekuderera kwe123000.
3. Bezos achasiya chigaro chake seMukuru weAmazon uye ave sachigaro webhodhi reAmazon mumatsutso a2021.Andy Jassie, maneja mukuru wekambani yeAWS, achatora chinzvimbo, ukuwo Bezos ichitarisa kune hunyoro, Blue Origin Space, Washington Post uye dzimwe nyaya dzechishuwo chake.
4. FTSE 100 yeUK yakadonha kubva pa04% kusvika pa6507.82, DAX30 yekuGerman yakakwira ne0.71% kusvika pa13933.63, uye CAC40 yeFrance yakaramba isina kuchinja pa5563.05.
5. Lancet, magazini inozivikanwa yezvekurapa yeBritish, yakaburitsa zvakabuda mu "Satellite-V" III kiriniki yekuyedzwa yemushonga weRussia COVID-19, iyo yakaratidza kuti kushanda kwejekiseni reSatelite-V kurwisa novel coronavirus yaive 91.6 %.
6.Iyo inoverengeka coronavirus dzakasiyana dzinowanikwa muUK dzachinja zvakare. Mushure mekuongorora, veBritish masayendisiti vakaona kuti mamwe emamwe masampuli aive neshanduko inonzi E484K, iyo yaimbove yakawanikwa mune akasiyana anowanikwa muSouth Africa uye Brazil. Nyanzvi kubva kuChirungu Public Health Agency vakati kuvapo kweshanduko dzakadaro mune mimwe chete mienzaniso yetsananguro yekoronavirus inowanikwa muUK hazvireve kuti shanduko dzakapararira uye kuti majekiseni anoshandiswa parizvino anofanira achiri kushanda.
7.Japan camera Imaging Machinery Association: global kamera kamera inotumirwa ichave mamirioni 8.88 mamirioni muna 2020, 42% pasi pegore ra2019. SLR makamera akadonha 47% kusvika 2.37 mamirioni, nepo asiri-Reflex makamera akadonha 26% kusvika 2.93 mamirioni. Global digital kamera inotumirwa inotarisirwa kusvika 9.53 mamirioni mayuniti muna 2021, kuwedzera kwe7 muzana pamusoro pe2020, asi zvakadaro pazasi pehutachiona hwehutachiona. Nekuda kwehosha iyi, nyika dzakasiyana dzakabvisa misangano uye dzikamisa kurambidzwa kubuda, zvichikonzera kudzikira kukuru kwekudiwa, uye makambani emakamera ari kuita nhamburiko huru yekugadzira makamera asingafadzi ane kudiwa kwakasimba.
8. Komiti Inoronga yeOlympic, Komiti yeInternational Olimpiki uye International Paralympic Committee zvakaburitsa bhuku rekutanga rekudzivirira chirwere padanho rechitatu, iro rakapa zvakadzama zvekudzivirira denda mumitambo yeOlympic neParalympic, asi zvaive chaizvo nekuti zviyero zvaive zvakanyatsotsanangurwa zvekuti zvaive zvakaoma kwazvo kutarisira.
Mutauriri wePentagon akati Lloyd Austin, wekutanga mutema wezvekudzivirira munyori uyo achangotora Dhipatimendi reDziviriro muUS, akazivisa pamusangano wevatungamiriri vemauto akasiyana siyana akaitwa musi iwoyo kuti madhipatimendi ese ehondo achavharwa anotevera mazuva makumi matanhatu ekukurukura kutyisidzira kunounzwa nechena supremacism uye zvakafanana kunyanyisa.
10.World Health Organisation (WHO): pakupera kwa2020, vanhu vanosvika mamirioni 19.3 pasi rese vakaonekwa vaine cancer uye mamirioni gumi vakafa nekenza. Gomarara rave rechipiri rinotungamira kurufu pasi rose, uye 1/5 yevanhu venyika vachatambura nekenza muhupenyu hwavo. Huwandu hwezviitiko zvitsva zvegomarara zvinotarisirwa kuwedzera zvakanyanya mumakumi emakore ari kuuya, uye panosvika 2040, huwandu hwezviitiko zvitsva pasirese zvichawedzera ne47% pamusoro pa2020, nekuwedzera kukuru munyika dzine mari yepasi nepakati.
11. Zvinoenderana nechirwere chepachirwere chakaburitswa muBritish Journal ye Natural Medicine, inoverengeka coronavirus yakasarudzika panguva ye COVID-19 denda muSouth Africa yakaongororwa kweinenge genome rese, uye gumi nematanhatu mitsva yehutachiona yakawanikwa. zvese zvine shanduko dzisina kuwanikwa kumwe kunhu zvisati zvaitika Iyi genome yekutarisa nzira inogona zvakare kushandiswa pamwero muhombe muAfrica kuona misiyano mitsva yenoverengera coronavirus.